Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiyaha Jaaliyadda Seattle/Washington oo Magacaabay Guddigii la Shaqayn Lahaa
Maalintii Sabtida ee bish March 14keeda waaxa magaalada Seattle ee gobolka Washington kaqabsoomay shirkii billaha ahaa ee jaaliyadda Seattle. Shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay dhamaan qaybaha kala duwan ee jaaliyadda sida ururada dhalinyarada, hooyooyinka iyo culuma awdiinka Soomaalida Ogadenya.
Shirka ayaa waxaa sidii caadada ahayd lagu furay aayadaha qur’aanka kariimka kadibna waxaa la guda galay ajendaha shirka oo ahaa in gudoomiyaha cusub ee jaaliyada Seattle mudane Cali Maxamed Axmed (Cali Yare) kusoo bandhigo guddigiisa cusub. Mudane Cali ayaa runtii soo doortay xubno aad ufirficoon oo waxwayna ka badali kara habsami usocodka jaaliyadda iyo guud ahaanba magalaada Seattle.
Soo bandhigidii magacyada iyo hoggaanadoodii kadib ayaa waxaa si xishmad ku dheehan tahay uga gudoomay xubnaha lasoo sharaxay iyagoo isla markanaan ay ballanqaadeen dhamaan iney sifiican ula shaqayndoonaan guddoomiye Cali.
Gabagabadii ayaa dhamaan guddiga iyo xubnaha jaaliyaddu is ballan qaadeen iney halganka sii xoojiyaan isla markaana dhibaatada shacabkooda meel walba gaadhsiiyaan.